War Deg Deg Ah: Doorashada Madaxweynaha oo goordhaw bilaabatay (Maxaa laga filan karaa) | Gaaloos.com
Home » News » War Deg Deg Ah: Doorashada Madaxweynaha oo goordhaw bilaabatay (Maxaa laga filan karaa)
War Deg Deg Ah: Doorashada Madaxweynaha oo goordhaw bilaabatay (Maxaa laga filan karaa)
Waxaa goordhaw bilaabatay doorashada Madaxweynaha Jamhuuriyada Federaalka Soomaaliya, waxaana doorashada ku tartamaya 22-musharax oo isugu jira Siyaasiyiin caan ah iyo kuwa saaxada siyaasada ku cusub.
Xildhibaanada labada Aqal ee Baarlamaanka ayaa dooranaya Madaxweynanha Soomaaliya ee talada dalka hogaamin doona 4-ta sano ee soo socota, waxa ayna Xildhibaanadan kasoo dhax xulan doonaan Musharaxiinta badan hal musharax kaliya.
Gudoomiyaha Baarlamaanka Federaalka Soomaaliya ayaa sheegay in kulanka Baarlamaanka ay xiligan joogaan Xildhibaano gaaraya 328 Xildhibaan ,waxaa sidoo kale la filayaa in hoolka soo gaaraan Xildhibaano kale oon wali imaan hoolka.
Musharaxiinta Madaxweynaha Soomaaliya ayaa intooda badan ku sugan hoolka ay ka dhaceyso doorashada, waxa ayna Musharaxiinta saacadihii lasoo dhaafay sameenayeen olole xoogan ay ku kasbanayeen codka Xildhibaanada labada Aqal.
Hoolka doorashada waxaa sidoo kale ku sugan wakiilo kasocda Beesha Caalamka iyo qaar kamid ah wadamada daneeya arimaha Soomaaliya, waxa ayna xubnahan goob jog ka noqonayaan doorashada manta lagu dooranayo Madaxweynaha Soomaaliya.
Amaanka goobta ay ka dhaceyso doorashada ayaa si weyn lo adkeeyay, waxaana halka laga galayo hoolka doorashada amaankeeda wax ka ilaalinaya ciidamada AMISOM oo si xoogan u baaraya dadka galaya hoolka.
Doorashada Madaxweynaha Soomaaliya ayaa maanta ah mid aad u adag, waxaana wali la saadaalin karin shaqsiga kusoo bixi doono halka kursiga Madaxweynaha ay u wada tartamayaan Musharaxiinta badan.
Waxii Warar ah ee kusoo kordha doorashada kala Soco Wararkayaga dambe Insha Allah
Title: War Deg Deg Ah: Doorashada Madaxweynaha oo goordhaw bilaabatay (Maxaa laga filan karaa)
Posted by Unknown, Published at 7:13 PM and have 0 comments